7 Sababaha Freaky Online Dating Ma laga yaabaa in aad loo eryay
Qof kasta waxa uu maqlay in mid ka mid ah nin kuwaas oo lagu helay in qasacadeysan, waayo, wuxuu ahaa ku match.com inta lagu jiro shaqada. Marnaba Waa in aad on website aad shukaansi marka aad shaqada. Waxay ku siin karaan dareen in aadan daryeeli ku saabsan isagoo halkaas, ama in aadan rabin in kuwan qaar ka mid ah talooyin kaa caawin doona inaad sii sankaaga nadiif ah oo ay dhibaatada dibadda ka ah marka aad shukaansi qof online oo aad rabto in aad weli awoodin inaad si fiican u samayn shaqada.
Waxaad ku kor le'an ka dambeeya shaqadaada
Si aad u bilaabaan, aad had iyo jeer raba in ay wakhtiga. Hal sabab oo aad uga rasaas laga yaabaa inay u shukaansi online xitaa kuma ay qabanayaan in ay aad u noqoto internet-ka ee goobta shaqada aad hubisid mailkooda. Haddii aad dooneyso inaad joogto dhibaatada wuu ka bixi, hubi farriimo aad nasashada qadada ama marka aad guriga. Ha shaqada ka daaho.
Your Tababaraha maleeyo inaad waqti aad internet-ka
Waxa kale oo la raacsiin karaa inaad in lagu eryo u shukaansi online waxaa lagu hubinaya shukaansi website mailkooda shaqada. Waxaad waxaa jira in ay ka shaqeeyaan, ma in la hubinta ku saabsan nolosha bulshada. Hubinta in mailkooda waa muhiim, laakiin waxaad u baahan doontaa in aad samayso marka aad ku jirtid nasasho ama waqti kale in aadan haysan in ay ka shaqeeyaan. Haddii kale, aad tababaraha ugu malayn kartaa in aad iska dhuminayaan waqtiga internetka, oo aakhirka aad rasaas iyo shaqaaleyn doonaa qof oo “ma aha internetka waqtiga oo dhan.”
Waxaad ka eegi sida haddii aad wax qarinaysid
Waa inaad sidoo kale mar walba ka war sida dabeecadda loo arko. Haddii aad wakiil ka Wreegay isku dayaya si ay u daboosho wax up ee goobta shaqada, aad Tababaraha kooxda isla markiiba ka shakisan tahay wax, ka dibna isha ku hay a dhow aad ku. Mid ka mid fudud warqada-up iyo Bam, aad ka baxeen.
Adiguna ma waxaad tahay jajabnaado
Ahaanshaha dabacsan waxaa qayb kale oo muhiim ah oo shukaansi online iyo nolol ganacsi guul. Waxaa laga yaabaa inaad dib-u-diyaarin jadwalka yara, laakiin haddii aad Tababaraha runtii u baahan yahay wax soo gabagabeeyay, sameeyaan markii isaga ama iyada.
Waxaad ma diiradda saaraan shaqadaada
Sidoo kale waa inaad lacag bixisid si aad dadaal aad u gelinaya in dareenka. Marka aad ka fikirin waxa aad xiran doona taariikhda in kulul aad qabto caawa, aadan oo diiradda saaraya shaqadaada, oo aan gelinaya in aad si buuxda,.
Waxaad badmouth aad u shaqayso online
Sidoo kale, marna waa in aad badmouth shirkadda, xitaa ma in aad taariikhda online. Haddii shirkadda ogaaday arrintan ku saabsan, waxa ay keeni karto in xilka laga qaado shaqadaada, oo ninna ma uu doonayo in. Xafid dhammaan comments elektaroonik ah oo ku saabsan goobta shaqada wanaagsan.
Waxaad daraan khalad ah dadka
Ugu dambayn, waxaad kaliya oo guud ahaan isku daydo in ay sii joogaan dhibaatada wuu ka bixi. In la dhexgalo khalad ah dadka waxay u horseedi kartaa in aad shaqo ka eryid. Ka dib markii talooyinkan dhigi doonaa inaad ku guulaysato noloshaada jaceyl iyo xirfad labadaba.
Waxaan ahay qof aad u xisaabiyay. Wax walba oo aan sameeyo si fiican loo qorsheeyay, waayo, wax aan sameeyo waa mid aad istiraatiiji ah. Goorma...